Bogga ugu weyn Waa Maxay Ciyaaraha Ugu Lacagta Badan Adduunka? | 10 Ugu Fiican 2022
Lacagta iyo magacu waxay hadda noqdeen kuwo la mid ah isboortiga sidaa darteedna waxaa loo gogol xaarayaa koox cusub oo milyaneerro badan leh si ay goobta uga qarxaan.
Iyada oo ay ka badan yihiin 8000 oo dhaqdhaqaaqyo isboorti oo adduunka ah, mid ayaa qiyaasi kara sida ay ugu adag tahay isboortiga iyo haweenku in ay ku lug yeeshaan isboorti aqoonsan dadaalkooda oo ku abaalmariya shaqadooda adag lacag wanaagsan.
Intee in le'eg ayay run tahay aragtida muddo dheer la qabay ee ah in caannimada isboortigu aysan qasab ahayn inay lacag u beddesho ka-qaybgalayaasheeda iyo ciyaartoydeeda?
Halkan waxaa ah 10ka ugu sarreeya isboortiga ugu mushaharka badan adduunka sannadka 2022 sida la isu soo uruuriyay iyadoo lagu saleynayo natiijooyinkii ugu dambeeyay.
Ciyaaraha Ugu Lacagta Badan Adduunka? | 10 Ugu Fiican 2022
Isboortiga ugu mushaarka badan adduunka sanadka 2022 waxaa ka mid ah;
Qaadashada kaalinta tobnaad ee liiska waa Baaskiil.
Isboortigu waa dhaqdhaqaaq jireed oo aad u tartamaya. Waxaa muhiim ah in la ogaado in ay jiraan dhowr qaybood oo ah tartanka baaskiilka oo ay ku jiraan tartanka baaskiilka waddada, tijaabinta waqtiga, cyclo-cross, tartanka baaskiilka buurta, baaskiilka orodka, BMX, iyo xawaaraha baaskiilka.
Ciyaaraha baaskiilka ee aan tartanka ahayn waxaa ka mid ah baaskiil wadista farshaxanka, polo baaskiilka, BMX-ka xorta ah, iyo tijaabooyinka baaskiilka buuraha.
Iyada oo in ka badan 15 tartamo baaskiil ku jira sanadka kalandarka. U hubso in dhacdooyinka sida Strade Bianche, Milan-Sanremo, Tour of Flanders, iyo Tour de France ay hubaal ka heli doonaan lacag aad u badan baaskiileyda.
Inta badan baaskiiladahaan waxay kaloo lacag badan ka helaan heshiisyada oggolaanshaha.
Baaskiilka halyeeyga ah Lance Armstrong ayaa lagu soo waramayaa inuu haysto lacag dhan $ 50 milyan
Isaga ka sokow, Peter Sagan ayaa la rumeysan yahay inuu yahay kan ugu mushaharka badan baaskiilka pro xilli ciyaareedkan. Xiddiga reer Slovakia ayaa lagu soo waramayaa inuu gurigiisa ku qaato 5 milyan euro xilli ciyaareedkii.
Ka soo muuqashada sagaalaad liiska isboortiga ugu mushaarka badan sanadka 2022 waa xeegada barafka. Ku naanaystayaashu waxay naanaysiiyaan inay yihiin ciyaarta ugu dhaqsaha badan dhulka, barafleydu barafka kuma dhex ordaan caag caag ah oo aan waxba galabsan. Waxaa la siiyaa mushahar aad u wanaagsan.
Tartanka ayaa leh tartamo ay ka mid yihiin Tartanka Koobka Hockey -ga Adduunka, Ciyaaraha Ciyaaraha Stanley Cup, iyo National Hockey League (NHL) iyo kuwo kale.
Marka loo eego Forbes, NHL ciyaartoyga ugu dakhliga badan xilli ciyaareedka 2022 waa Auston Matthews. Xarunta Maple Leaf ee Toronto waxay ka dhigtaa $13 milyan mushahar ahaan.
Dakhliga Matthews ee ka soo gala taageerada, xusuusta, iyo shatiyeynta ayaa lagu qiyaasaa $3 milyan, sidaas awgeed wadarta dakhligiisa wuxuu ka dhigay $16 milyan.
Ku xiga waa tennis.
Waxaa dad badani u arkaan mid ka mid ah isboortiga madadaalada ee ugu caansan oo ay ka ciyaaraan malaayiin adduunka oo dhan, ciyaartooyda Tennis -ku waxay isku tiriyaan inay ka mid yihiin kuwa ugu mushaharka badan isboortiga adduunka.
Warkaan waxaa laga yaabaa inuusan u noqon naxdin maxaa yeelay daraasado ayaa cadeeyay in tennis -ku uu yahay isboortiga labaad ee ugu baahida badan oo tijaabin doona adkeyntaada ilaa xadkeeda.
Xiddigan, waxaad ku fahmi doontaa sababta ay u tahay isboorti aad mushahar u leh. Sida laga soo xigtay warbixin Forbes, Halyeeyga Roger Federer waa ciyaaryahanka tennis-ka ugu dakhliga badan 2022.
Waqtigan xaadirka ah, Federer wuxuu kasbaday wadar dhan $52 milyan oo taageero ah shirkado badan sida Nike, Rolex, iyo Credit Suisse.
Federer ayaa sidoo kale ku guuleystay $ 4.2 milyan oo ah lacagta abaalmarinta taas oo wadar ahaan u kasbatay guud ahaan $ 56.2 milyan sannadkan.
Ciyaartoyda kale ee ugu sarreeya ee caan ka ah adduunka tennis -ka waa Rafal Nadal, Serena Williams, iyo Novak Djokovic iyo kuwo kale.
7. Kubbadda baseball
Baseball -ku waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu badan ee laga ciyaaro Ameerika. Sidoo kale waa mid ka mid ah isboortiga ugu mushaarka badan adduunka sababtoo ah aqbalaad ballaaran.
Tusaale ahaan, cayaaryahanka baseball -ka Mareykanka Cecil Fielder 1993 -kii wuxuu noqday qofka 8 -aad ee dunida ugu taajirsan marka loo eego Forbes oo dakhligiisu dhan yahay $ 12.7million.
Imaatinka lambarka 6 waa isboortiga loo arko inuu yahay kan ugu caansan uguna baahida badan isboortiga dhulka, Soccer ayaa mar kale sameysay liiska cayaaraha ugu mushaarka badan sanadka 2022.
Ciyaartoyda kubbadda cagta ayaa caan ku ah xad -dhaafnimada maaddaama ay inta badan saxiixaan qandaraasyo waaweyn oo mushahar leh.
Magacyada caanka ah sida ciyaaryahanka kubadda cagta ee Ingiriiska David Beckham ayaa mar kaalinta 8aad ka galay liiska Forbes ee cayaartoyda ugu mushaharka badan 2004 oo dakhligoodu dhan yahay $ 28 milyan.
Waqtigan xaadirka ah, laacibka kooxda FC Barcelona ee Lionel Messi ayaa ah xiddiga ugu mushaarka badan kubadda cagta adduunka, sida ay qortay Forbes.
Ciyaaryahanka ku guuleystay Ballon D'or oo lixda jeer qaata lacag dhan 130 milyan oo doolar sanadkii.
Waxaa soo socda Cristiano Ronaldo oo kaalinta labaad galay ka dib markii uu helay $120 milyan xilli ciyaareedkii 2022.
Sidoo kale, akhri tan: 13 Shaqooyin Online Degdeg ah oo Fudud oo loogu talagalay Ardayda Kulliyadda 2022 -ka
5. American kubada cagta
Lovers of National Football League (NFL) waxay yeelan doonaan wax ay ku dhoollacadeeyaan maadaama Kubadda Cagta Mareykanka ay ka hesho booskeeda saxda ah liiska isboortiga ugu mushaarka badan 2022.
Iyadoo la tixgelinayo dabeecadda adag ee ciyaartan, dad badan ayaa u arki doona inay ku habboon tahay in mushaharka ciyaartoydan ay sii kordhaan.
Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee overthecap.com, 32 ciyaartoy oo ka tirsan NFL ayaa hadda sameeya ugu yaraan $ 20 milyan xilli ciyaareedkii celcelis ahaan mushaharka sanadlaha ah.
Ciyaaryahanka ugu mushaharka badan horyaalka ee Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes. Mahomes wuxuu kasbadaa $ 45 milyan xilli ciyaareedkii celcelis ahaan mushahar sanadle ah heshiiskii uu saxeexay kahor xilli ciyaareedkii 2020.
Laacibka labaad ee ugu mushaharka badan horyaalka waa Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott, kaasoo sameeya $ 40 milyan xilli ciyaareedkii. Dib -u -dhaca Houston Texans Deshaun Watson, oo sameeya $ 39 milyan celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah, ayaa kaalinta saddexaad galay.
Isboortiga kubbadda cagta iyo kubbadda ayaa qaata kaalinta afaraad oo ah isboortiga ugu mushaarka badan 2022.
Sida laga soo xigtay Forbes, Mr Tiger Woods ayaa weli ah kan ugu mushaarka badan golfer sanadka 2022,
Sida laga soo xigtay Sportico.com, Mr. Woods dakhligiisu waa lacag dhan $ 62 milyan oo ah dakhligiisii ​​sannadka.
Warbixinta ayaa daaha ka qaaday in 10 -ka qof ee ugu mushaharka badan Golf -ka ay sameeyeen lacag lagu qiyaasay $ 300 milyan 12kii bilood ee la soo dhaafay, kaliya 29% ay ka timid lacag abaalmarin ah.
Goolasha kale ee golf-ka ugu dakhliga badan waa Phil Mickelson: $ 46.1 milyan Dustin Johnson: $ 40.8 milyan, Rory McIlroy: $ 32.8 milyan, Jordan Spieth, $ 29.6 milyan. Justin Thomas: $ 20.3 milyan, Bryson DeChambeau: $ 17.9 milyan, iyo Xander Schauffele: $ 17.3 milyan.
Celcelis ahaan mushaharka golfer -ka ayaa lagu qiyaasaa ilaa $ 628,079.
Tartanka gawaarida ayaa ka dhigaya seddexda ugu dambeysa inay yihiin isboortiga ugu mushaarka badan 2022.
Iyada oo dhowr munaasabadood oo tartan ah la qabto sannad walba sida Grand Prix of Formula1, NASCAR, iyo Indianapolis 500, ayaa ah khatar aad u saraysa, abaalmarin aad u sarraysa ayaa ah qabashada darawalada orodka baabuurta oo aan si fudud hoos ugu dhigi karin mushaharkooda.
Darawalka caanka ah ee British-ka ah iyo horyaalnimada F1 Lewis Hamilton ayaa ah darawalka ugu mushaharka badan F1 sannadka 2022. 36-jirkan ayaa dhawaan u saxiixay Mercedes heshiis hal sano ah oo qiimihiisu yahay $ 55 milyan oo doolar.
Isaga oo ku xiga labaad waa Fernando Alonso. Fernando Alonso oo laba jeer ku guuleystay horyaalnimada Spain ayaa sheegay in uu qaato $ 20,500,000.
Darawalada kale ee xoolo badan ka samaynaya ciyaartan waa Charles Leclerc, Ferrari ($ 16.5m) Sebastian Vettel, Aston Martin - £ 12m ($ 16.5m) Daniel Ricciardo. McLaren - £ 11m ($ 15m) Valtteri Bottas, Mercedes - £ 7.5m ($ 10.5m) Kimi Raikkonen, Alfa Romeo - £ 6.5m ($ 9.5m) Carlos Sainz. Ferrari - £ 6m ($ 8.5m) Lance Stroll, Aston Martin - £ 6m ($ 8.5m) Sergio Perez. Red Bull - £ 5.5m ($ 8m) Lando Norris, McLaren - £ 3.5 ($ 5m) Pierre Gasly. Alpha Tauri - £ 3.5m ($ 5m) Esteban Ocon, Alpine - £ 3m ($ 4.2m)
Marka labaad liiska isboortiga ugu mushaarka badan waa Feerka. Farshaxanka sharafta leh ee is-difaaca ayaa ah cayaar aad khatar u ah sidaa darteed feeryahannadu runtii waxay mudan yihiin waxay kasbadaan mar kasta oo ay soo galaan wareegga labajibbaaran.
In kasta oo feerayaal adag la garaacay, haddana isboortigu wuxuu hanti badan u helay Floyd Mayweather Jnr, Mike Tyson, Oscar Dela Hoya, Mike Tyson iyo kuwo kale.
Feeryahanka reer Mexico Canelo Alvarez ayaa kaalinta 12aad ka galay liiska Sportico ee 100-ka ciyaartoy ee ugu mushaharka badan intii u dhexaysay June 2020 iyo May ee sannadkan.
Xiddiga reer Mexico ayaa ah kan kaliya ee ku jira liiska, iyadoo Anthony Joshua iyo YouTuber-feer-yahanka Jeke Paul la sheegay inay ka baxsan yihiin 100-ka Top.
Alvarez wuxuu sameeyay $ 61 milyan oo giraanta ah iyo $ 2 milyan oo kale oo kaabis ah.
Anthony Joshua iyo Jake Paul waxay kasbadeen $ 20 milyan oo lagu daray, sida lagu qoray Twitter-ka Kurt Badenhausen oo ka tirsan Sportivo.
Joshua wuxuu halgamay hal mar muddadii loo qoondeeyay, isagoo joojiyay Kubrat Pulev bishii Diseembar.
Qaadashada booska ugu xiisaha badan ee isboortiga ugu mushaarka badan waa Basketball.
Isboortiga aadka loo jecel yahay oo ka yimid USA laakiin helay aqoonsi caalami ah ayaa sii wada inuu abuuro milyaneero badan. Tartanka kubbadda koleyga ee caanka ah sida National Basketball Association (NBA) ayaa ka mid ah horyaallada isboortiga ee ugu mushaarka badan.
Ka qaybgalayaashu waxa ay kooxahooda ka helaan mushahar maskaxeed. Ka sokow, waxay sidoo kale malaayiin ka helaan heshiisyada ay ku taageerayaan.
Ciyaartoyda Basketball -ka ugu mushaarka badan NBA -da waa;
Stephen Curry oo ka tirsan Warriors State Golden oo qaata $ 43,006,362 milyan
Russell Westbrook -Washington Wizards $ 41,358,814 milyan
Chris Paul, Phoenix Suns- $ 41,358,814 milyan
James Harden, Brooklyn Nets- $ 41,254,920 milyan
John Wall, Houston Rockets- $ 41,254,920 milyan
Kevin Durant, Brooklyn Nets- $ 40,108,950 milyan
LeBron James, Los Angeles Lakers- $ 39,219,565 milyan
Paul George, LA Clippers- $ 35,450,412 milyan
Klay Thompson, Warriors State Golden- $ 35,361,360 milyan
Mike Conley, Jazz Utah- $ 34,502,130
Waa kuwan tobanka kooxood ee ugu qiimaha badan kubbadda koleyga adduunka
10 Toronto Raptor; Qiimaha - US $ 2.15 bilyan
Dallas Maverick; Qiimaha - US $ 2.45 bilyan
Gantaalkii Houston; Qiimaha - US $ 2.5 bilyan
Brooklyn Net; Qiimaha - US $ 2.65 bilyan
Clippers -ka Los Angeles; Qiimaha - US $ 2.75 bilyan
Boston Celtics; Qiimaha - US $ 3.2 bilyan
Chicago Bulls; Qiimaha US $ 3.3 bilyan
Los Angeles Lakers; Qiimaha - US $ 4.6 bilyan
Warriors State Golden; Qiimaha - US $ 4.7 bilyan
New York Knicks; Qiimaha - US $ 5 bilyan
Intaa waxaa sii dheer, Forbes ayaa sidoo kale sii deysay 10ka ciyaartooy ee ugu mushaarka badan isboortiga adduunka 2022.
Conor McGregor, UFC: $ 180 milyan
Xiddiga Barcelona Lionel Messi, Barcelona: $ 130 milyan
Cristiano Ronaldo, Juventus: $ 120 milyan
Dak Prescott, Dallas Cowboys: $ 107.5 milyan
LeBron James, Los Angeles Lakers: $ 96.5 milyan
Neymar, Paris Saint-Germain: $ 95 milyan
Roger Federer, tennis: $ 90 milyan
Lewis Hamilton, F1: $ 82 milyan
Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers: $ 76 milyan
Kevin Durant, Brooklyn Nets: $ 75 milyan